Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan ee aan ku leenahay Spain | Safarka Absolut
Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan
Markay cimiladu fiicantahay yimaado, kuligeen waxaan dooneynaa inaan qubeysanno. Maydho biyo nadiif ah, bannaanka iyo meesha ay dabeecaddu sidoo kale u tahay geesiga. Hagaag, inaad ku raaxeysato waxaas oo dhan, waxna ma ahan sida xulashada barkadaha dabiiciga ugu fiican waxaan leenahay dalkeena.
Geesaha gaarka ah ee dabeecadda sidoo kale noo oggolaaneysa inaan ku raaxeysto. Marka waan kulmi doonaa biyo aad u caafimaad badan iyo meelo kaamil ah oo looga fogaado waqti ka waqti. Xaqiiqdii in kabadan mid ka mid ah barkadaha dabiiciga ah ee aan sheegi doonno ayaa kuu soo dhowaan doona.
1 Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan, Termas de Ourense
2 Daloolin dhuunta
3 Barkadaha dabiiciga ee Rascafrías
4 The Charcones
5 Font Calda
8 Ilaha Algar
Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan, Termas de Ourense
Galicia, waxaan ku raaxeysan karnaa wareegga kuleylka ee hawada furan. Waa qiyaastii afar kiiloomitir, halkaas oo aan ka heli karno qaar si khaas ah loo isticmaalo laakiin intooda badani waa dadweyne waxayna u dhameystiran yihiin adeegsiga iyo raaxeysiga. Kuwaas oo aan ku iftiiminayno Chavasqueira, Muiño das Veigas, Burgas de Canedo iyo ilo biyo kulul oo kulul. Waxaa laga yaabaa in kuwa ugu caansan ay yihiin kuwa Chavasqueira, oo sidoo kale loo yaqaan, 'Baños do Bispo'.
Dadku waxay buuxinayaan wicitaanka Isha Tinteiro, maadaama biyaheeda lagula talinayo dhibaatooyinka bogsashada. Kaliya 3 kiilomitir meeshan, waxaan ka helnaa Muiño das Veigas. Biyaheeda ayaa kufiican qofkasta oo qaba xanuunka lafaha, lafa xanuunka ama dhibaatooyinka maqaarka. Barkadaha Outariz iyo Burgas de Canedo waa lacag la'aan. Waxay sidoo kale ku fiican yihiin dhibaatooyinka lafaha.
Haddii aan u safreyno Cáceres, waxaan heli doonnaa waxa loogu yeero Garganta de los Infierno. Waa dhul dabiici ah oo ku yaal qaybta galbeed ee Sierra de Gredos. Marka lagu daro aragtida cajiibka ah, goobtan oo kale, waxaan ka heli doonnaa durdurro, iyo sidoo kale biyo-dhacyo, barkado iyo innagoon ilaawin barkadaha dabiiciga ah. Adoo yeelanaya tusmo qoyan oo sareeya, waa waxa ka dhigaya inay yeelato geedo hareeraheeda ah. Waxaad ku raaxeysan kartaa maalin maydhasho laakiin sidoo kale raad socod qurux badan.
Barkadaha dabiiciga ee Rascafrías
Waa run in Madrid aysan laheyn xeeb laakiin waxa ay heystaan ​​waa qaar barkadaha dabiiciga sida Rascafría. Markay kuleylku wax dhacaan, wax la mid ahi uma cararaan 'Las Presillas', oo ku xigta webiga Lozoya. Laga soo bilaabo halkan waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa aragtida qumman ee Pico Peñalara. Goobtani waxay guud ahaan leedahay 3 barkadood oo lagu dabaasho. Hareeraheeda waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa aagag waaweyn oo cagaaran oo aad ku nasato kuna raaxaysato maalin qoys.
Mid kale oo ka mid ah barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan ayaa laga helaa Lanzarote. Ku saabsan yahay 'Los Charcones'. Waxay ku xigaan burburka hoteel aan weligiis dhammaan. Waa barkado dabiici ah oo aan ku eegi doonno sida biyuhu isugu yimaadaan midabyo kala duwan. Laakiin intaas waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale yeelan doonnaa bad aad u dhow. Waxay ku taal meel sax ah koonfurta-galbeed inkasta oo la helo waxoogaa dhib ah, hadana waa u qalantaa markaan aragno wax kasta oo janadani ina siiso.
Tarragona waxaan ka heli karnaa aag na siinaya faa'iidooyin badan. Dhinac, il ay leedahay biyo dawo ah oo ku soo baxda heer kulka 28º. Waxay ku taal agagaarka webiga, Canalete. Waa halkan halka ay sidoo kale ku taal aag, sida barkadda dabaasha, oo awood u leh in lagu maydho. Laakiin intaas kaliya maahan, laakiin sidoo kale waxaad leedahay aag xilli firaaqo iyo miisas aad ku qaadatid cunnadaada fudud. Kaymaha geedaha geedaha iyo qulqulka dhagxaanta ayaa noqon doona saaxiibbadaada ugu fiican safarkan.
Hadda waxaan aadey Tenerife iyo si gaar ah aaggeeda woqooyi. Halkaas, waxaan ka dooneynaa adkeynta lakabka ka imanaya folkaanaha Trevejo. Markii uu qarxay kadib, meeshan cajiibka ah ayaa la sameeyay. Kuwani waa aagag ay ka buuxaan biyo cusbo, qaab barkado leh qaabab kala duwan. In kasta oo dhammaantood leh quruxda ugu quruxda badan. Waxay ku yaalliin badda horteeda iyo inay si fiican kuu dhigaan, agagaarka Qalcadda San Miguel ee Garachico.
Ma seegi karno meel sida Gulpiyuri oo kale ah. Waxay ku taal Asturias jaleecada horena waa wax aad u qurux badan. Waa nooc xeebeed laakiin kuma yaal aagga xeebta. Sababtuna waxay tahay biyuhu waxay ku gaadhaan dhulka hoostiisa. Waa inaad tagtaa Llanes si aad indhahaaga ugu aragto. Si aad u hesho, waxaad ka lugeyn doontaa waxa loogu yeero San Antolín xeebta iyo sidoo kale Naves.
Kaliya 15 kiiloomitir Benidorm, Waxaan leenahay mid kale oo ka mid ah barkadaha dabiiciga ah ee ugu wanaagsan. Goobtu waxay ku taal Callosa d´en Sarrià. Sidoo kale halkan dabeecaddeeda quruxda badan waxay taagan tahay halka biyo-dhacyada, dhagxaanta dhagaxa ah iyo dabcan, biyaha hooska cagaarka la isku daro. Waad marin ka sameyn kartaa aagga oo safarkaaga waad ku dhammaysan kartaa adigoo si fiican u quusin kara biyaha noocan ah. Waa inaad xusuusnaataa in goob sidan oo kale ah ay badanaa leedahay booqashooyin badan, sidaa darteed waa inaan marwalba tagnaa goor hore ama maalmaha-usbuuca marka ay caan noqon doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan